TRANO PRINTIM-PIRENENA: 80 % ny kaominina hananany trosa avokoa. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE TRANO PRINTIM-PIRENENA: 80 % ny kaominina hananany trosa avokoa.
By Nirinasept 12, 2017, 13:31 0
Rehefa taratasy ilaina amin’ny raharaham-panjakana, ao amin’ny trano printim-pirenena no hividianana izany. Hita ao amin’ny tranokalan’ity orinasam-panjakana ity avokoa ny vidin’entana toy ny bokin’omby, “quittance”, registra ampiasain’ny kaominina, boky ilaina ao amin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany…Nambaran’ny Tale Jeneralin’ny trano printim-pirenena, Jean Angelson RANDRIAMBOAVONJY fa mangarahara avokoa ny asa rehetra ataon’izy ka raha misy ny vidin’entana tsy mifanaraka amin’ny voarakitra ao ao anatin’ny tranokala dia tsy tomponandraikitra amin’izany ny orinasa tantanany. Manentana tsirairay ny tenany mba hitsidika izany tranokala izany mba hanamarina ny vidin’entana ao amin’ny trano printim-pirenena mba tsy ho voafitaka.
Betsaka ireo kaominina no manana trosa amin’ny trano printim-pirenena. Araka ny fanazavany, saika ny 80% ny kaominina eto Madagasikara no mbola tsy nahefa ny trosany amin’ny orinasa noho ireo entana novidiana tao izay ilaina eny anivon’ny kaominina. Efa manomboka manilika ny azy kosa ny kaominina Antananarivo Renivohitra. “Efa 100 tapitrisa Ariary no naloany”.
Previous PostCHAMPIONNAT NATIONAL SPORTS PARALYMPIQUES : Ho fampiatiana ireo olona tra-pahasembanana Next PostDIRECTION GENERALE DES IMPOTS: Politika hanatsarana ny fampidiran-ketra ny fanisana ireo mpandoa hetra.